Dhibcaha Salaadda Ee Kuwa Lagu Eryayo Injiilka | QODOBADA SALAADA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda Dhibcaha Salaadda Kuwa Lagu Cadaadinayo Injiilka
Dhibcaha Salaadda Kuwa Lagu Cadaadinayo Injiilka
Efesos 6:18 markastana ku tukada tukasho iyo baryo kasta oo Ruuxa ku jira, idinkoo sidaas ku dadaalaya adkaysashada oo dhan iyo adkaysashada quduusiinta oo dhan.
Maanta waxaan la macaamili doonnaa dhibcaha salaadda kuwa loogu silciyey injiilka. Waxaan maqalnay sheekooyin rasuullo iyo nebiyo ah oo si xun loola dhaqmay injiilka Masiixa aawadiis. Waxaa jira silciyayaal uu sheydaanku u qoondeeyay inuu si xun ula macaamilo dadka xambaarsan iftiinka injiilka. Ibliisku wuxuu adeegsadaa qorshahan si uu u xaddido xaddiga injiilka. Xusuusnow kitaabka Matayos 28:19 Sidaa darteed taga oo xer ka dhig quruumaha oo dhan, oo ku baabtiisa magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah, iyaga oo baraya inay dhawraan wax kasta oo aan kugu amray; oo bal eeg, anigu mar walba waan idinla joogaa, xataa ilaa dhamaadka da'da.
Kani wuxuu ahaa amarkii Masiixa ee ahaa inaan u galno adduunka oo aan xer ka dhigno quruumaha. Dhanka kale, sheydaanku wuxuu fahamsan yahay in hadii hadafkan lafuliyo, nafo badan ay ka badbaadi doonaan cadaabka dembiga iyo naarta. Tani waxay sharraxeysaa sababta uu sheydaanku wax walba u qaban doono si uu uga hor tago hawshan. Aynu xusuusano sheekada Rasuul Bawlos. Kahor intaanu Bawlos noqon Rasuulkii Rabbiga, wuxuu ahaa silcin weyn oo muuminiinta ah. Bawlos iyo raggiisii ​​waxay si ba'an u silciyeen dadkii Masiixa oo doonaya inay injiilka Masiixa ku wareejiyaan magaalada oo dhan.
Sidoo kale adduunkeenna maanta, dad badan ayaa la dilay, sidaa darteed dad badan ayaa ku lumay hantidooda iyo waxyaabo kale oo badan kuwa silciyey. Waxaa jira meelo adduunka ka mid ah oo daruurta mugdiga ahi ay aad u xoog badan tahay in kuwa keenay iftiinka injiilka aysan ku guuleysan karin haddii kale waa la dili karaa. Halkii aan gacmaha ka laaban lahayn oo aan u adeegsan lahayn hadalka afka keligiis si aan u cambaareyno xukunka, waxaa lagama maarmaan ah in aan sidoo kale kor u qaadno meel allabari oo lagu tukado ragga iyo dumarka ay ku dhacday masiibo xun injiilka dartiis Markuu Rasuul Butros xabsiga ku tuuray, kaniisaddu kuma aysan laaban gacmahooda aamusnaan keliya, Rabbiguna si qiiro leh ayuu ugu tukaday isaga iyo ciilkii Ilaah wuxuu ku yaabsaday baryadoodii.
Buugga Falimaha Rasuullada wuxuu duubay sida Boqor Herodos u amray in la soo xiro dad ka tirsan kaniisadda. Peter waa la qabtay waxaana lagu tuuray baararka dambe. Ilaalo aad u hubeysan ayaa la dhigay si ay u sugaan amniga xabsiga. Boqorka qorshihiisu wuxuu ahaa in Butros maxkamad la horkeeno markay tahay Iidda Kormaridda kadib. Si kastaba ha noqotee, wax baa dhacay ka hor Iidda Kormaridda. Falimaha Rasuullada 12: 5 Sidaas darteed Butros baa lagu hayay xabsiga, laakiin kiniisaddu aad bay Ilaah ugu baryaysay isaga. Habeenkii ka horreeyey Herodos inuu xukumo, Butros wuxuu kala dhex hurday laba askari isagoo ku xidhan laba silsiladood; oo addoommadiina waxay istaageen iridda horteeda. Isla markiiba malaa'igtii Rabbiga ayaa soo muuqatay, iftiin baana iftiimiyey qolka. Markaasuu Butros dhinaca ku dhuftay oo toosay. "Degdeg, kac!" silsiladihiina way ka soo dhaceen gacmaha Butros. Markaasaa malaa'igtii waxay ku tidhi, Dharkaaga iyo kabahaaga xidho. Butrosna sidii buu yeelay. Malaa'igtii baa ku tidhi, Dharkaagii ku wareegsan oo i soo raac. Butros baa daba socday isaga oo ka soo baxay xabsiga, laakiin ma uu garanaynin in waxa malaa'igtu samaysay ay run tahay; wuxuu moodayay inuu arko aragti. Waxay dhaafeen waardiyihii kowaad iyo kii labaad waxayna yimaadeen iridda birta ah ee magaalada laga galo. Iyadu way u furtay iyaga keligood, oo way dhex mareen. Markay soo mareen jidka dheer dhererkiisa, malaggii ayaa ka tegey
Markaan aad u baryootanno, Ilaah baa kici doona oo samatabbixin doona dadkiisa. Haddii aad dareento inay jirto baahi ah in loo duceeyo kuwa loo silciyey injiilka, isticmaal qodobbada salaadda ee hoose.
Rabbi Ciise, waxaan kuugu mahadnaqayaa hadiyadda cajiibka ah ee badbaadada ee aad noogu keentay daadinta dhiiggaaga ee iskutallaabta Calvary. Waxaan kuugu mahadnaqaynaa hawsha weyn ee ah inaan ereyga Ilaah ku wacdinno dooxada qadhaadh ee kuwa aan la badbaadin. Waan ku weyneeynayaa Sayid Ciise.
Aabbaha Sayidow, waxaan u ducaynaynaa dhammaan rumaystayaasha lagu silciyey injiilka dartiis. Waxaan kaa codsaneynaa in naxariistaada, aad ka caawin doontid inay nabad helaan xitaa marka ay dhibaato jiraan. Sayidow xitaa itaaldarradooda, waxaan kaa codsaneynaa inaad siiso iyaga xoog si aysan waligood uga noqon ama uga noqon magaca Ciise.
Aabbe Sayidow, waxaan ka baryeynaa inaad iyaga siiso ereyada saxda ah ee ay ku hadli karaan. Waxaan kaa codsaneynaa inaad qalbiyadooda ka buuxin doonto geesinimo, waxaan kaa codsaneynaa inaad maskaxdooda ku buuxiso geesinimo. Nimcada iyaga si ay u sii taagnaadaan xitaa inta lagu jiro dagaalka kulul, waxaan kaa codsaneynaa inaad iyaga ku siiso iyaga xagga Ciise.
Aabbo Sayidow, waxaan kaa baryeynaa inaad taabato quluubta iyo maskaxda kuwa silciyay. Sida aad Rasuulka Bawlos ula kulantaan kulan weyn oo aad ugu sii jeedaan Dimishiq, waxaan idinka baryeynaa inaad u oggolaanaysaan kuwa silcinaya inay kulan weyn la yeeshaan magaca Ciise. Waxaan ku duceyneynaa kulan beddeli doona noloshooda wanaag, waxaan kaa codsaneynaa inaad sabab u noqoto tan inay ku dhacdo magaca Ciise.
Sayid Ciise, waxaan kaa codsaneynaa inaad kuwa aaminka ah ku xoojiso xoog iyo nimco aysan isku hallayn naftooda. Waxaan kaa codsaneynaa inaad u hibeyso iyaga nimcada ay kugu tiirsanaan karaan adiga oo keliya. U ogolow inay iyagu ka helaan awood ka weyn dhimashada iyo sarakicidda Masiixa. U ogolow xoogga ruuxa quduuska ahi inuu noqdo gaashaan iyo gaashaan magaca Ciise wata.
Rabbi Ciise, waxaan kaa codsaneynaa in joogitaankaagu uusan ka tegi doonin kuwa sida xun loogu silciyey koorsadan. Waxaan ku duceyneynaa inaad halkaas joogi doonto markay u baahan yihiin rajo, markay u baahan yihiin xoog ay ku sii socdaan, waxaad iyaga siin doontaa mid. Waxaan Rabbi Ciise ka baryeynaa in ruuxaagu uusan uga tegin iyaga magaca Ciise.
Rabbi Ciise, Qorniinku wuxuu leeyahay indhaha Rabbi had iyo goorba waxay fiiriyaan kuwa xaqa ah. Rabbi Ciise, waxaan ka baryeynaa inay meel ay tagaanba, in gacmaha Ilaah ay mar walba dul saaran yihiin. Waxaan kaa codsaneynaa inaad sidaada oo kale u sameyso waxyaabo la yaab leh nolosha Butros adoo adeegsanaya ducada kaniisadda, waxaan weydiisaneynaa in kuwa loo silciyo injiilka ay naxariis ka helaan magaca Ciise.
article PreviousQodobbada Salaadda ee loogu talagalay maskaxda Ilaah ee ku jirta qalbiga hoggaamiyeyaasha
Next articleQodobbada Salaadda ee Ka Soo Horjeeda Colaadaha Qabaa’il Ee Ka Taagan Dalka Nigeria
Salaada ka dhanka ah sixir iyo sixir
Salaada Miracle Si Loogu Guursado Mar dhaw
Ducada Si Loogu Soo Bixiyo Deynta
5 AAYADAHA PSALMKA EE LAGU SOO BARADO CARRUURTAAGA WAQTIGA